Cinema HD V2 Usetyenziso-Bukela iimuvi, uthotho kunye nemiboniso yeTV Mahala
Cinema HD YeFireStick
Cinema HD Yebhokisi yeTV ye-Android
Cinema HD KuGoogle TV 4k
Cinema HD Ye-Smart TV
Cinema HD Ye Roku
Cinema HD KwiWindows
Cinema HD Mac
Cinema HD YeLinux
Hlela Cinema HD I mpazamo
Cinema HD -I-Debrid yokwenyani ayisebenzi [Ilungisiwe]
The Cinema HD I-APK ayinadatha ekhoyo, akukho makhonkco, akukho nxibelelwano, okanye impazamo yeseva (FIX)
Imibhalo engezantsi Ukophuka, UkuFaka/UkungaFaki, kunye neCinema APK Crashing zonke zisonjululwe.
Cinema HD I-APK Akukho Datha, akukho NONE
Uphonononga iMovie kwi Cinema HD
Kule mihla, abantu babukela rhoqo iinkqubo zokusasaza kumabonwakude okanye basebenzise i-intanethi ukubukela iimuvi abazithandayo kunye nemiboniso kwi-intanethi kwiiapps ezihlawulwayo. Ungafumana usetyenziso oluninzi olubonelela ngemiboniso oyithandayo kunye neemuvi ezinje Netflix, Hulu, HBO, ezinye ii-apps zostrimisho, kwaye zonke ziiapps ezihlawulweyo.
Ukuba ufuna ukufumana i-app yokusasaza yasimahla enomxholo okumgangatho ophezulu kunye nethala leencwadi elikhulu lemiboniso bhanyabhanya kunye nemiboniso yeTV, khuphela Cinema HD APK kwiwebhusayithi yethu CinemaHDv2.Net ukonwabela ngoku.
Uya kufumana ngokukhawuleza umxholo owuthandayo kwaye uyonwabele kwisixhobo sakho se-Android ngenxa yeempawu ezinomtsalane ezibonelelwa yile app. Qhubeka ufunda inqaku ukujonga ezi mpawu.
Ukwazisa ku Cinema HD Download
Iimpawu ezibalaseleyo ze Cinema HD
Ujongano lomsebenzisi olula
Iitoni zeemuvi kunye neenkqubo zeTV
Amava e-cinema encinci
Yonwabela umxholo onemibhalo engezantsi
Yongeza imiboniso oyithandayo kuluhlu lwakho
Uluhlu olucetyiswayo luphawu
Hight quaility revolution kunye nesandi
Yonwabele iimuvi kunye neenkqubo zeTV ngaphandle kweintanethi
Gcina kwaye Ubuyisele
Yintoni ekhethekileyo kwi Cinema HD Apk ifayile
Inani elingenamkhawulo wemiboniso bhanyabhanya kunye nemiboniso simahla
Akukho bhaliso olufunekayo
Indlela ukulanda Cinema HD Apk kwi Android?
Amanyathelo ngokubanzi ukukhuphela i Cinema HD app
Imiyalelo eneenkcukacha yokufaka Cinema HD Download
Indlela ukulanda Cinema HD I-App kwi-FireStick 4K, iTV yoMlilo?
Amanyathelo okufaka Cinema HD Apk yePC?
Khuphela uze ufake Cinema HD APK kwi Windows 11/10/8.1/7 PC okanye ikhompyuter ye-MAC [TUTORIAL]
KwiLinux Mint, Ubuntu, kunye neFedora, faka i Cinema HD APK yeMOD.
Amanyathelo okufaka i-Slashlik Android Emulator kwiLinux
Uyifumana njani iGenyMotion ye-Android Emulator kwiLinux
Hlohla Cinema HD app kwikhompyuter yeLinux usebenzisa iShashlik/GenyMotion Emulator ye-Android
Ukusebenzisa iGenymotion Android Emulator
Indlela yokufumana Cinema HD ukusebenza kwi-Android TV Box & Smart Tv?
Iimbonakalo Cinema HD kwi-Smart TV
Faka Cinema HD V2 kwi-Smart TV [LG, VU, OnePlus, Samsung, MI, Phillips]
Uyisebenzisa njani iTrakt TV kwi Cinema HD v2 kwi-Smart TV
umxokozelo Cinema HD V2 I-APK yeBhokisi yeTV ye-Android
Faka Cinema HD V2 APK kwiRoku Stick
Inyathelo 1: Kwisixhobo sakho se-Android, khuphela kwaye ufake i-app ye-Local Cast.
Inyathelo 2: Khuphela kwaye ufake i-app ye-Local Cast Receiver kwisixhobo sakho se-Roku.
Inyathelo 3: Qhagamshela isixhobo sakho se-Android okanye seApple kunye neRoku Stick
Faka Cinema HD v2 kuGoogle TV 4K kwiChromecast
Uhlaziya njani Cinema HD Apk ngenguqulelo yamva nje?
Kusetyenziswa kwanjani Cinema HD Apk?
Cinema HD lusetyenziso olukhulu lwezixhobo zakho ze-Android ezikunika uluhlu lweemuvi ezidumileyo, kunye nemiboniso yeTV ekumgangatho ophezulu. Le app ikunika injini yokukhangela ukuba ufumane ngokukhawuleza iimuvi kunye nemiboniso yeTV oyithandayo kwaye ukhethe ukonwabela.
Cinema HD Inguqulelo yeBeta
Le app iya kubonisa amakhonkco afumaneka simahla kwiwebhusayithi, kwaye aya kubonakala kwisixhobo sakho. Ngeempawu ezinyanzelisayo zolusetyenziso, awusoze uphelelwe ziinketho zostrimisho lwemiboniso bhanyabhanya oyithandayo. Cinema HD Download unayo?
I-Android TV Ibhokisi
I-TV kaGoogle 4K
le Cinema HD Usetyenziso lunojongano olulula olukunceda ukuba uqonde ngokukhawuleza indlela yokuyisebenzisa kunye namaqhosha omsebenzi kwiscreen sesicelo. Ungakhangela ngokulula kwizihloko Cinema HD cwangcisa kule app.
Ikwakuvumela ukuba ujonge kwiitreyila zeemuvi kunye nemiboniso bhanyabhanya ngaphambi kokuba uthathe isigqibo sokuba ukhethe ngowuphi umxholo oza kuwonwabela okanye hayi. Ujongano olulungileyo nolulula lweCinema app luya kukunceda ube namava okubukela imuvi.
Esi sicelo seCinema sikunika ubutyebi beemuvi kunye nemiboniso kwiindidi ezingama-60. Unokufumana ngokulula iimuvi ezahlukeneyo ezothusayo, ezothando, ianime, kunye nokunye kudidi lwale app. Ngaphandle kwethala leencwadi elikhulu lemiboniso bhanyabhanya, uya kufumana ngokulula iinkqubo zeTV kwaye uzonwabele simahla nazo Cinema HD.
Cinema HD ikunika amava okubukela imuvi amnandi njengokubukela kwi-cinema encinci. Ukuba uyoyika ukuya kwi-cinema ukubukela iimuvi, le app iya kuba lukhetho olufanelekileyo kuwe.
Cinema HD v2 -Amava ecinema encinci
Kufuneka uvule ifowuni yakho ye-Android kwaye ufikelele kule Cinema apk ukonwabela umxholo owuthandayo kanye ekhayeni lakho okanye naphi na apho ufuna khona. Le app iya kunceda abathanda imuvi kunye nolonwabo njengawe ukuba wonge ixesha elininzi kwaye wonwabele umxholo owuthandayo ngokulula ngakumbi.
le Cinema HD app iya kukunika into eluncedo onokuthi udlale iividiyo ngemibhalo engezantsi ngokuzenzekela. Ukuba awukhethi izihlokwana, kuya kufuneka ukhethe ngesandla ifayile ukonwabela imixholo. Isicelo siya kubonelela ngemibhalo engezantsi ngokuchanekileyo ukukunika owona mava afanelekileyo okubukela imuvi.
Yonwabela umxholo onemibhalo engezantsi - Cinema HD v2
In Cinema HD, uyakuba nokhetho olukhulu nge Trak TV Ukudityaniswa okukunceda wenze uluhlu lokudlalayo ukuze udlale ngokukhawuleza imiboniso oyithandayo. Eli nqaku liza kwenza uluhlu lwemiboniso oyibukele mva nje kwaye iya kukwazisa ngalo lonke ixesha kukho isiqendu esitsha somboniso okanye imuvi oyibukele.
Ngenxa yoko, unokuhlaziya ngokukhawuleza nangokulula umxholo omtsha kwaye ukonwabele uninzi lwezinto ezinomtsalane ezinikezelwa yiapp.
kunye Cinema HD, uya kuba nenketho yokuvula i-autoplay ukuze ukonwabele ngokukhawuleza iimuvi kunye nemiboniso oyithandayo. Xa ukhetha into, iya kubonisa amanye amakhonkco, kwaye kuya kufuneka ukhethe enye lala makhonkco kwaye ukhethe inketho ethi "Dlala" ukuqala ukujonga. Kodwa ngokudlala ngokuzenzekelayo, akuyi kufuneka ukhethe amakhonkco, kunye ne Cinema HD app izakuqala ukudlalela ividiyo.
Cinema HD inolunye uphawu oluluncedo oluluLuhlu oluCetyisiweyo, inqaku eliqinileyo kwesi sicelo semuvi esithandwa ngabasebenzisi abaninzi. Uninzi lwemiboniso bhanyabhanya kunye neemovie ziyakhangelwa kwaye zihlaziywa kwimenyu ephambili yesicelo yonke imihla.
Cinema HD V2 –Inqaku loLuhlu oluCetyisiweyo
Ukongeza, isicelo sikwabonelela ngolunye uluhlu oluxhomekeke kuphela kwisixhobo sokucoca i-AI sokucoca kwaye sicebise iimuvi kunye nemiboniso yohlobo olufanayo naleyo oyibukeleyo okanye oyijongayo.
Iimuvi kunye nemiboniso leyo Cinema HD icebisa ukuba nonke niya kuza nolwazi oluneenkcukacha olufana negama, ukukala, imvelaphi, umhla wokukhutshwa, itreyila, kunye nabadlali abaphambili. Ukususela kulwazi oluneenkcukacha olukunceda ukuba uqonde ulwazi malunga neemuvi, inkqubo yenza kube lula kuwe ukuba ukhethe umxholo ofanelekileyo kwaye uyonwabele.
Ukukunika amava angcono, ngaphandle kokubonelela ngenani elikhulu lemiboniso bhanyabhanya, Cinema HD ikwakunceda ukuba ukonwabele umxholo okumgangatho ophezulu ngaphandle kokungena kwi-debrid yokwenyani.
Uya kuba nexesha elifanelekileyo lokuphumla kunye nemiboniso bhanyabhanya oyithandayo kunye neemovie egcwele umgangatho ophezulu isisombululo nale app. Ukongeza, ungasebenzisa isici sokudlala ngokuzenzekelayo ukubukela HD or iHD ephezulu iimuvi kwi Cinema HD.
Uya kuba namava okonwabisa ngakumbi okubukela imuvi kunye nenqaku lokukhuphela ngaphandle kweintanethi Cinema HD inikeza wena. Ngeli nqaku liluncedo, unokukhuphela ngokulula iimuvi, iinkqubo zeTV kwaye ukonwabele nawuphi na umxholo owuthandayo ngokulula.
Iimuvi kunye neenkqubo zeTV- Cinema HD v2
Ungonwabela iimuvi, kunye nemiboniso kwiselula yakho ye-Android nangaliphi na ixesha naphi na apho ufuna ngale nto Cinema HD Download usetyenziso. Khuphela iimuvi, iinkqubo zeTV kwaye uzintywilisele kwiziqendu zeTV, ifilimu ngaphandle koqhagamshelo lwe-intanethi okanye intlawulo yedatha yeselula kwisixhobo sakho.
Cinema HD iyakugcinela ixesha elininzi xa usebenzisa i-app ngokuxhasa konke okuthandayo, imbali, useto, kunye nezinto ozikhethayo kwifayile eyahlukileyo eyeyakho. Ukufumana indawo yale fayile, uya ku Khuphela/cinema HD/ugcino.
Ungathumela ngaphandle ifayile kwaye uyilayishe kuso nasiphi na isixhobo sakho esitsha. Ngaphaya koko, le app ibonelela nge-auto-backup feature, ukuze ukwazi ukuyenza emva kokuphuma kwi-app kwi-backup kunye nokubuyisela useto. Ukusuka apho, i-backup iya kusingathwa emva kokuba uvale usetyenziso, kwaye unokuqhubeka ngokulula ukonwabela umxholo owuthandayo kwixesha elizayo.
umxokozelo Cinema Hd v2 APK
The Cinema HD app iyakukunika nezinye izinto ezininzi ezisisiseko ezifana nezihluzi, isidlali sevidiyo esingagqibekanga, kunye nokukwazi ukuhluza umxholo ophantsi. Uya kufumana ezi zinto zahlukeneyo, ziluncedo ukukunika amava amnandi okubukela iimuvi zakho ozithandayo kunye nemiboniso.
Ukuba ufuna ukufumana inguqulelo ephuculweyo eneempawu ezininzi eziphambili simahla ukuze ufumane amava amangalisayo, khuwunlo Cinema HD Download kwiwebhusayithi yethu CinemaHDv2.Net. Kunye neyethu Cinema HD Imod APK, uya kufumana izinto ezininzi eziphambili, ezibandakanya: Wonke umxholo usimahla kwaye awunamda.
Cinema HD Download luguqulelo olulungisiweyo lwe Cinema HD Iinkqubo zeTV ezifumaneka simahla kwiwebhusayithi yethu CinemaHDv2.Net. Ngale fayile ye-apk, unokufikelela ngokukhululekileyo kuwo wonke umxholo owenziwe yi Cinema HD app ibonelela simahla.
Cinema hd -Bukela iimuvi zeHD Mahala
Ukongeza, i Cinema HD Download iya kukubonelela ngesixa esingenasiphelo somxholo, ukuze ukonwabele iimuvi zakho ozithandayo kunye nemiboniso bhanyabhanya ngaphandle kokukhathazeka ngokuphelelwa ngumxholo.
Enkosi kwezi mpawu ziphambili zolu setyenziso bhanyabhanya, uya konga imali eninzi kwaye akufuneki uhlawule iindleko zobhaliso lwenyanga, khetha nje umxholo owuthandayo kwaye wonwabe.
Ukuba ukhe wanamava amaqonga okubukela imuvi afana Netflix, HBO, okanye ezinye ii-apps zostrimisho, mhlawumbi uya kudinwa ukuba ubhalisele i-akhawunti kwaye uhlawule imali yokufikelela kwiimovie zakho ozithandayo, imiboniso, kunye nemivuzo. bavuse.
Ngoku, awusayi kuphinda ube nexhala malunga noku, Cinema HD isicelo siya kubonelela ngesixhobo sokukhetha ngokukhululekileyo kunye nokusasaza iimuvi, kunye nemiboniso yeTV ngaphandle kokubhalisela iakhawunti kwaye simahla.
Awudingi ukuba nexhala malunga nokuxela iinkcukacha zakho zobuqu ukuze ubhalise i-akhawunti efana negama lakho, idilesi, kunye ne-imeyile. Ngeli nqaku, unokufikelela ngokukhululekileyo kwaye uzonwabisa ngomxholo owuthandayo obonelelwa yiCinema ngaphandle kokungena kwiakhawunti yakho.
In Cinema HD Download, awuzukuba nexhala malunga neentengiso ezibonakala ziphazamisa amava akho. Le nguqulo mod ye Cinema HD iyakususa zonke iintengiso ukuze ubukele iimuvi, kunye nemiboniso yeTV ngaphandle komthungo kwaye ngaphandle kokuphazamiseka.
Cinema hd v2 Ukukhuphela apk
Ukukhuphela Cinema HD Download isicelo ukonwabela iimuvi zasimahla, iinkqubo zeTV, ungalandela la manyathelo alula angezantsi:
inyathelo 1: Ukuya faka iCinema Apk, kuya kufuneka ukuba uvumele isixhobo sakho Android ukufaka le app kwimithombo yangaphandle. Ukwenza olu seto, kuya kufuneka uye kuSeto kwi-Android yakho, emva koko ukhethe Ukhuseleko, kwaye emva koko uvule imithombo engaziwayo.
inyathelo 2: Kwisixhobo sakho Android screen, uya ku CinemaHDv2.Net emva koko ukhangele Cinema HD Download kwibha yokukhangela.
inyathelo 3: Ucofa i "umxokozelo Cinema HD v2 APK” iqhosha kwindawo engezantsi yenqaku
inyathelo 4: Ndilinde Cinema HD Download Inkqubo yokukhuphela usetyenziso lwemizuzwana embalwa, emva koko unokuvula le cinema apk ukonwabele.
⬇︎ Khuphela Cinema HD V2 APK
Okokuqala, uya kuya kuseto kwisixhobo sakho Android, kwaye ukhethe "Iiapps kunye nezaziso":
Okulandelayo, khetha "Iimvume zoSetyenziso"
Emva koko, uya ku "Faka iiapps ezingaziwayo"
khetha Isiphequluli se-Chrome kwiinketho:
Layita: "Vumela kulo mthombo"
Kwisikrini sasekhaya, uya kwi-browser ye-chrome kwaye emva koko ukhethe zokulanda
Yenza inkqubo ye Faka iCinema Apk ifayile
Faka Cinema HD v2
Lindela ukufakela ukugqiba
vula Cinema Hd v2
Emva kokugqiba inkqubo yofakelo lwe Cinema HD V2, ngoku unokukhawuleza uvule ifayile ye-apk kwaye ujabulele iimuvi ezininzi kunye neenkqubo zeTV ezibonelela ngeCinema Apk kwii-smartphones zakho ze-Android, ngaphandle kwe-emulator ye-Android.
Ukukhuphela le nto Cinema HD Download on I-FireStick 4K, Umdlalo weTV Umlilo 4K, ukuba ufake nayiphi na ifayile ye-Apk kweyakho Intonga yomlilo, kuya kuba lula ukufaka i-app. Kungenjalo, kuya kufuneka ulandele la manyathelo angezantsi ukufaka Cinema Apk kwi Firestick:
inyathelo 1: Okokuqala, uya kuqalisa isixhobo sakho kwaye ulinde isikrini sasekhaya sesixhobo sibonakale. Kwisikrini sakho senkqubo yolawulo, kuya kufuneka wenze "Imithombo engaziwayo"(Faka iiapps ezingaziwayo) ukutshintsha.
inyathelo 2: Okulandelayo, khetha: “TV yam yomlilo"Okanye"izixhobo zam"
inyathelo 3: Emva koko, uya kucofa ku: "Ukhetho lomphuhlisi"
inyathelo 4: Isikrini siza kubonisa ukhetho "Imithombo engaziwayo” onokuthi uvule okanye uvale.
inyathelo 5: Okulandelayo, uyakukhangela ukhetho "Umxokozelo” kwiSkrini saseKhaya kwaye ucofe ku “vumela” ukusebenzisa le app ukuvula usetyenziso lokukhuphela.
inyathelo 6: Kwi "Uhlelo lokusebenza lokukhuphela” kwesikrini sakho I-TV Stick Stick, uya kwenza kwicandelo lomkhangeli zincwadi kwaye ufake ikhonkco: https://cinemahdv2.net/download/ ukuvula Cinema Apk app kwaye ukhuphele le app yefayile yendawo yasimahla ukonwabela iimuvi kunye nenkqubo. Okanye khuphela ifayile ye-Apk apha:
⬇︎ Khuphela Cinema HD V2.4.0 APK
inyathelo 7: Emva kokugqiba ukukhuphela ifayile Cinema Apk kwi Firestick, I-TV yomlilo, iyakuseta ufakelo ngokuzenzekelayo kwaye ngokukhawuleza. Akufunekanga: ungaphumi kwiscreen esikhulu ukuze inkqubo yokuhlohla yenzeke ngempumelelo.
inyathelo 8: Emva kokugqiba ukufaka Cinema Apk kwi Firestick, ungavula i Cinema HD Ifayile ye-apk kwaye wonwabele imiboniso bhanyabhanya oyithandayo nangaliphi na ixesha, naphi na apho ufuna.
Unako ngokukhawuleza fakela Cinema HD APK on I-FireStick 4K, I-TV Stick Stick, Umlilo weCube ngamanyathelo akhuselekileyo kunye asebenzayo kwimidiya yakho efunyenweyo. Ungonwabela ngokukhululekileyo umxholo wokusasaza xa usebenzisa Cinema HD apk ngaphandle kokuya kwiiSayithi zokuSasaza okanye kufuneka ufake usetyenziso.
Uya kuyidinga I-Android Emulator yale. I-Nox App Player sisilinganisi esitsha se-Android esinezinto ezininzi eziluncedo. Ungayifumana i I-Nox App Player ukuseta ngaphandle kweintanethi ukusuka ngezantsi.
⬇︎ Khuphela iNoxApp Player yeeWindows
⬇︎ Khuphela iNoxApp Player yeMac
Yima ukuze ufakelo lugqibezele. Xa ukuseta ngaphandle kweintanethi kugqibile ukukhuphela, cofa kabini ifayile ephunyezwayo ukuqalisa inkqubo yokuhlohla I-Nox App Player.
Xa uthanda qala Nox App Player, i-wizard yokuhlohla ivela kwiscreen ngamaqhosha ambalwa. Kwifestile yokugqibela, i 'Faka' iqhosha liza kubonakala. Nceda ucofe i 'Faka' iqhosha ukuvumela ucwangciso faka iNox App Player kwiWindows PC/MAC Computer yakho.
Emva kokuphehlelela i-emulator, hlala ukhumbula ukuba kunokuthatha ixesha ukuyifakela. Umdlali weNox App uya kuseka ngokukhawuleza kwiPC yakho.
Ke, ukuba awukakwenzi, khuphela Cinema APK kwikhonkco elingezantsi.
⬇︎ Khuphela Cinema HD APK
Xa iifayile ze-APK zigqibile ukukhuphela, cofa kabini kuzo ukuze uqalise iNox App Player. Khetha Vula Nge kwi-pop-up menu evelayo.
I-emulator iya kukhuphela ngokuzenzekelayo kwaye ifake ifayile ye-APK yakho Windows PC/MAC Computer.
Inkqubo iya kuthatha nje imizuzu embalwa ukugqiba. Emva koko, i ICinema APK icon inokufumaneka kwi I-Nox App Player isikrini sasekhaya.
Ukuqalisa inkqubo, cofa nje i icon yayo.
Unako ukufaka i-Android APPS kwi Linux kunye nezinto eziphuma kuyo, kubandakanya iMint, Ubuntu, kunye neFedora, usebenzisa Shashlik Android Emulator or GenyMotion Android Emulator.
Unokujonga imiyalelo yomphuhlisi weShashlik Android Emulator ukusuka apha. Sifake nekopi apha ngezantsi ukulungiselela wena.
Usebenzisa lo myalelo ulandelayo kwi-prompt yomyalelo, khuphela iSixhobo seRepo:
Okulandelayo, chwetheza lo myalelo ulandelayo kwifestile yomyalelo kwisikrini esilandelayo esivelayo:
Ngoku, nceda wenze ulawulo olutsha kwaye uqalise ungqamaniso logcino. Ukukunceda, le miyalelo ilandelayo inikezelwe.
Ekugqibeleni, chwetheza lo myalelo ulandelayo ukugqiba ukufakela.
Unokusebenzisa ikhonkco elidweliswe ngasentla ukuya download GenyMotion Android Emulator kumatshini wakho weLinux.
Okokugqibela, khuphela kwaye ufake iGenyMotion kwiLinux PC yakho. Ungafumana ulwazi oluthe vetshe kule nkqubo ikhonkco ngasentla.
Sebenzisa i-Shashlik Android Emulator
Khuphela kwaye ufake i-emulator ye-Android ukusuka http://www.shashlik.com/ -> Kwiyakho Linux PC, Khuphela kwaye uqalise iShash.
Zikhuphelele le Cinema HD I-APK yamva nje ifayile kwisixhobo sakho. Sibonelele ngekhonkco kuyo apha ngezantsi, njengento eluncedo kuwe.
Tsala kwaye ulahle Cinema HD APOD ifayile kwi-interface ye-Shashlik Emulator.
Inyathelo elilandelayo liya kuba kukuqhuba isifakeli.
Emva kokufaka, unokuqalisa ukusebenzisa Cinema HD kwindlela yakho yeLinux.
Nceda uvule i GenyMotion Android Emulator.
Tsala kwaye ulahle Cinema HD Ad-Free MOD APK ifayile oyikhuphileyo kwiphepha elidlulileyo ukuya kujongano lweGenyMotion.
Ufakelo luyakuqala ngoku.
Emva kokuba ufakelo lugqityiwe, ungasebenzisa Cinema HD APK ukusasaza iimuvi zakho ozithandayo kunye neenkqubo zeTV simahla.
Ngoku unokubukela iifilimu zakho ozithandayo kunye nothotho kwisixhobo sakho se-Android. NgeCinema APK, ungonwabela zonke iimuvi zakho ozithandayo, iinkqubo zeTV, kunye nothotho lwasimahla. Ngoku ungajonga kakhulu njengoko ufuna enkosi kule software imangalisayo, eza nobuchule obubalaseleyo kwaye isimahla.
Cinema HD APK inenani elikhulu leetshaneli zeTV ukukunika kwi-high-definition, kwaye ngenxa yokuba le app iyamangalisa kangangokuba inokukugcina uncamathele kwisixhobo sakho se-Android ngalo lonke ixesha.
Nangona usetyenziso lungekafumaneki kuDlalo lukaGoogle, lunokufakwa kwisixhobo sakho usebenzisa izixhobo zomntu wesithathu. I-app isimahla kwaye iqulethe izinto ezininzi ukuze uzonwabele.
Le app ibandakanya iimpawu ezininzi ezibalaseleyo kunye neempawu, ezinye zazo zezi zilandelayo.
Akukho zindleko zifihliweyo ezinxulumene nale nkonzo.
Umgangatho ophezulu wesicelo womxholo wongeza kwisibheno saso.
Inkqubo ikhuseleke kakhulu kwaye ithembekile.
Inenkangeleko entle eyenza ibonakale inomtsalane ngakumbi.
Kukho ubutyebi bezikhululo zeTV kunye nezinye izinto ezifikelelekayo, ezimangalisayo.
Indlela yoku-1: Ukusebenzisa i-Pen Drive Method
1; Ungasebenzisa le software kwifowuni yakho Smart TV, njenge I-Samsung Smart TV, I-LG Smart TV, Sony, nabanye.
2; Okokuqala nokuphambili, vula imenyu yeeSetingi ze-Smart TV yakho.
3; Seta Vuma ukusuka Imithombo engaziwayo ukuya kwi.
4; Fumana “Umhloli weFayile ye-ES" kwi Play Store kwaye uyikhuphele kwisixhobo sakho.
5; Vula usetyenziso kwaye ucofe ADD.
6; Emva koko, cofa kabini ifayile kwaye uyifake kwisixhobo sakho se-Android ngokunqakraza kwi bhukmakhi. -> Cofa kwiibhukhimakhi ukufikelela kunye fakela a Cinema APK app ku https://cinemahdv2.net/.
7; Ungayifaka inkqubo kwiifayile ezikhutshelweyo kwaye uqalise ukuyisebenzisa.
Indlela yesi-2: Ukusebenzisa iPuffin Browser
Unga faka i Cinema HD APK ifayile kweyakho Smart TV usebenzisa Isiphequluli sePuffin. Isikhangeli se-puffin sisikhangeli esitsha esisetyenziswa ikakhulu kwi-Smart TVs ukukhuphela ii-apps. Makhe ndikuhambise ngendlela yokukhuphela kunye nokufaka Cinema HD APK kunye nesikhangeli se-puffin.
Vula i-Smart TV's Play Store kwaye faka iPuffin Browser.
Kwi-Smart TV yakho, vula i Play Store kwaye ufake Isiphequluli sePuffin.
vula le Isikhangeli sewebhu sePuffin yakho Smart TV (ifuna uqhagamshelo kwi-Intanethi).
Zikhuphelele le Cinema HD APK ukusuka kwikhonkco elingezantsi usebenzisa i Isikhangeli sePuffin. Ifayile ye-APK iya kugcinwa kwifolda yakho yokukhuphela emva kokukhuphela.
Cofa kwifayile ye-APK emva kokuba uyikhuphele kwikhompyuter yakho. Emva koko, yiya kwifolda yokukhuphela kwaye ucofe kabini ifayile ye-APK. I Imithombo engaziwayo ukhetho luyakwenziwa lusebenze.
Ukuba uyafuna uku fakela ifayile ye-APK kwi-smart TV yakho, kufuneka uqale uvule Imithombo engaziwayo ukhetho.
Emva kokuvumela i Imithombo engaziwayo ukhetho, sebenzisa iqhosha elithi Ngena elikude ukuvula ifayile ekhutshelweyo ye-APK.
The Cinema HD APK izakufakwa kweyakho Smart TV emva kokuba ucofe iqhosha lokufakela kwi-prompt.
The Cinema HD app ifakiwe ngoku; ungafikelela kuyo ngokuya kwiiApps ezikweyakho Smart TV.
Ngaphambi kokukhuphela kunye nokufaka ifayile Cinema HD APK, qiniseka ukuba i-smart TV yakho inegumbi elaneleyo.
Trakt TV sisongezelelo seTV esirekhoda yonke imbali yakho yokubukela. Isongezo seTrakt TV siyakugcina umkhondo wayo yonke into oyijongayo kwi-smart TV yakho. Unokujonga emva kwimiboniso yangaphambili oyibonileyo kwi-smart TV yakho. Nazi iinkqubo zokubandakanya iTrakt TV add-on kwi Cinema HD app.
Emva kokuba uyifakile i Cinema HD app, yiya kwi ukhetho lwemenyu kwaye ukhethe izicwangciso.
Thepha Akhawunti ukhetho kwi izicwangciso menu.
Kwimenyu yeeakhawunti, khetha Ngena kwiTrakt TV njengokhetho lwesithathu. Faka i-add-on ngokukhetha ukhetho.
Ngoku kuya kufuneka ufake eyakho Trakt TV iimpawu kwibhokisi yokungena. Kwindawo yegama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha, chwetheza igama lakho lomsebenzisi kunye negama lokugqitha. Emva koko cofa "sayina"Iqhosha.
Ukongezwa kweTrakt ngoku kukuvumela ukuba ulandele umkhondo wesiqendu ngasinye sokubukela.
Landela iinkqubo ezifanayo njengangaphambili, kodwa ngeli xesha yiya kwakho I-Android TV IbhokisiIzicwangciso zokhuseleko kwaye uvule Imithombo engaziwayo.
Kanye emva koko, unokusebenzisa ikhonkco elinikiweyo ukufumana ifayile ye-APK yosetyenziso.
Linda de ukukhuphela kugqitywe kwaye uvule ifayile.
Jonga usetyenziso kwiBhokisi yeTV yakho ye-Android emva kokufakwa kugqityiwe.
Ungaqalisa kwaye usebenzise inkqubo kwesi sikrini.
Ngaphambi kokuba uqalise ukufakela, qiniseka ukuba i-smartphone yakho ye-Android kunye unyaka isixhobo ziqhagamshelwe kwinethiwekhi efanayo WiFi. Awudingi ukuba neengcambu ifowuni yakho Android kule nto.
Ungayilanda ICinema APK Ifayile kwi-smartphone yakho ye-Android ukusuka apha.
Zikhuphelele le CINEMA HD v2 APK kwikhonkco elingezantsi:
Ukuqala, kufuneka ukhuphele kwaye ufake inkqubo yomntu wesithathu eyaziwa ngokuba 'Abalingisi baseKhaya' isuka e I Google Play Store.
vula le Usetyenziso lweCast lwasekuhlaleni. Isikrini esiphambili sesicelo siya kuba ne-Icon yokuCasa etyheli. Khetha enye ngokucofa kuyo, kwaye uya kuthathwa kuluhlu lwezixhobo ezinokusasazwa.
Kuya kubakho ukhetho lokutshintsha ukuskena okusebenzayo. Sebenzisa le ndlela ukwenza i 'Iinketho zokuFumana' eRoku.
Ukuqala, qhagamshela i Roku Intonga kwi-Smart TV yakho kwaye uqinisekise ukuba unonxibelelwano lwe-intanethi oluzinzileyo ekhayeni lakho.
Vula iVenkile yeRoku kumabonwakude wakho.
Kwikona esezantsi ekunene, uya kubona ukhetho lokukhangela; kulapho unokukhangela khona Ummkeli weNdawo yokuCasa.
Nje ukuba yonke into ifakiwe, buyela kwiphepha eliphambili lemenyu yesixhobo sakho.
Faka entsha cinema HD inikezelwe kwikhonkco elandulelayo kwaye uyiqalise.
Ngoku kufuneka ukhethe ifilimu okanye inkqubo yeTV oza kuyibukela.
Uya kunikwa amakhonkco awodwa ukufikelela kwimuvi okanye inkqubo oyikhethileyo.
Kuya kufuneka uqale uCofe kwaye ubambe nawaphi na amakhonkco avelayo, emva koko ukhethe i Vula ngeAll Cast ukhetho.
Nantso ke into ekhoyo! Ngoku ifilimu/uthotho lweTV owuthandayo lunokujongwa kwiRoku. Awuyi kuthintelwa ekuthatheni iifowuni okanye ukuthumela imiyalezo ngelixa usasaza kwi-smartphone yakho ye-Android.
Ku fakela Cinema HD APK kwi Roku, landela la manyathelo mahlanu alula. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nathi nge iphepha loqhagamshelwano.
Abalandeli be-Android baya kukuvuyela ukufunda ukuba entsha I-TV kaGoogle 4K kunye Chromecast ixhasa usetyenziso lwe-Android kunye nemidlalo. Oku kuthetha ukuba unokufaka i-APK yomntu wesithathu kwi-TV kaGoogle 4K yamva nje ngeChromecast ngokunjalo. Makhe sijonge indlela yokufaka Cinema HD APK kuGoogle TV 4K usebenzisa Chromecast kweli nqaku.
Ukufakela Cinema HD Ad-Free APK on I-TV kaGoogle 4K, kufuneka ugqibezele uthotho lwezenzo. Nantsi inkcazo emfutshane ukulungiselela wena.
Nika iiNdlela zokuKhetha zoPhuhlisi (Icandelo 1)
Landela la manyathelo angezantsi ukudibanisa igajethi yakho kaGoogle kamabonakude kunye ne-smart TV yakho.
Cofa iqhosha leMenu yeProfayile kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini sikaGoogle TV.
Iisetingi, i icon yegiya Cofa kwi Khetha iNkqubo yokuSkrola phantsi kwaye ukhethe Kwi-Android TV OS Yakha amaxesha angama-7 usebenzisa iqhosha elijikelezayo le-TV kaGoogle elikude, nceda ukhethe malunga.
Nceda ucofe Android TV OS Yakha 7 amaxesha usebenzisa iqhosha elijikelezileyo le-TV kaGoogle kwindawo ekude phantsi kwe-About.
Uza kubona ukufundwa kwesaziso "UnguMakhi.” Uya kuba nakho ukukhuphela usetyenziso lomntu wesithathu kwi UGoogle 4K.
Hlohla Cinema HD APK kuGoogle TV 4K (Icandelo 2)
Nceda uye kukhetho lweApps olusuka kwimenyu ethe tye kwiscreen sasekhaya sikaGoogle TV.
Emva koko, phantsi kweeCategories ze-App, khetha Khangela ii-Apps.
Faka Umxokozelo kuGoogle TV yakho ngokungenisa uMkhupheli kwiBar yokukhangela.
vula le App yokukhuphela kanye ukufakela kugqityiwe.
Nceda uvule Ukuba bucala > Ukhuseleko kunye nezithintelo yakho Useto lweprofayile.
Nceda jonga Imithombo engaziwayo yenziwe phantsi kokhetho lweMithombo engaziwayo.
Emva koko, yazisa i-app yokuKhuphela kwiscreen sasekhaya phantsi kwecandelo leeNkqubo zakho.
Vumela ukufikelela ngokucofa ku-Vumela.
Nceda ufake le URL ilandelayo kwindawo ye-URL ye-Download App ukuze ukhutshelwe Cinema HD I-APK yamva nje yeTV kaGoogle.
Xa ugqibile ukukhuphela i-APK, kuya kuvela imiyalelo elula yokufaka kwiscreen. Ukuya fakela Cinema HD kuGoogle TV, landela amanyathelo afanayo.
Nantso ke into ekhoyo! Ungafaka nayiphi na i-Android App yomntu wesithathu kwi I-TV kaGoogle 4K kunye Chromecast ngokulandela le miyalelo ingentla.
Uyihlaziya njani iCinema App kuGoogle TV ngeChromecast
Inkqubo yohlaziyo Cinema HD kuGoogle TV ukuya kolona guqulelo lwamva nje luthe ngqo. Sikucacisele yonke into engezantsi.
yiya Usetyenziso lwakho > Cinema HD.
Khetha kwaye ubambe uluhlu lwe-app.
Isikrini siya kuvela sicela ukuba ukhethe Imboniselo Iinkcukacha.
Hlaziya okanye Khipha lukhetho olubini.
Vula Google TV app ekude kwinkqubo yakho Android kwaye uye ku izicwangciso, emva koko ukhethe u-Apps. Khetha Cinema HD APOD ukuyisusa kweyakho
Nceda ugcine engqondweni ukuba awuzukufumana uhlaziyo oluzenzekelayo lwe-app kuba ayiveli kuGoogle Play Store. Ukufumana olona guqulelo lwamva nje, lukhuphe ngokulula kwaye ulubuyisele usetyenziso.
Ukuze ndikuzisele amava okubukela iifilimu, kunye nemiboniso yeTV ngobuninzi obungenamkhawulo, abaphuhlisi bomxholo Cinema HD Download iya kuqhubeka ihlaziya kwaye ikhuphe iinguqulelo ezintsha ezineempawu ezongezelelweyo, iinguqulelo ezilungisiweyo zebugs kunye nezinye ezininzi.
Ukuba ufuna ukuhlaziya kuguqulelo lwamva nje lwe-app, ungalandela la manyathelo alula angezantsi:
Xa ufumana umyalezo wohlaziyo oluzenzekelayo ngalo lonke ixesha uguqulelo olutsha lufumaneka, ungacofa Faka kwifestile yohlaziyo kwaye uqale ukuhlohla uguqulelo olutsha.
Ungajonga kwakhona iinguqulelo ezintsha ezihlaziyiweyo ze-app ukusuka imenyu → Ukuthetha → Uhlaziyo olutsha olukhoyo kwaye uqale ukuhlaziya inguqulelo entsha ukuze uyonwabele.
Emva kokugqiba ufakelo lwe Cinema apk, uya kufumana isicelo silula kakhulu ukusisebenzisa kuba ayifuni naluphi na ulwazi lobugcisa. Ungayivula ngokukhawuleza le app kwiscreen esikhulu ukuqala ukonwabela umxholo wokusasaza.
Xa uvula ifayile ye Cinema Apk okokuqala, uya kubona ulwazi olusisiseko lwe-app. Kwaye uya kucofa "Qhubeka” ukuqhubeka usebenzisa le app, okanye ungacofa “Vala” ukuba ufuna ukuyeka.
Xa uqhubeka nokusebenzisa iCinema Apk, uya kunikwa ujongano lomsebenzisi, oluya kubonisa imiboniso yeTV ngumdlali wevidiyo ongagqibekanga. Ukukhetha ukusasaza iimuvi simahla, yiya ku imenyu kwaye ukhethe bhanya kwimenyu ehlayo.
Kwikhathalogu yomxholo obonelelwa yiCinema Apk, uya kufumana ingqokelela yeemovie zaseHollywood ezidumileyo kunye nemiboniso yeTV, kwaye unokukhetha nawuphi na umxholo owuthandayo onokuwonwabela ngokuwukhetha kwiphepha lasekhaya okanye ukukhangela usebenzisa ibhokisi yokukhangela.
Emva kokukhetha umxholo owuthandayo, kuya kufuneka uchukumise "Watch” iqhosha kwaye uqalise ukuntywila kwimiboniso bhanyabhanya enomtsalane. Unokukhetha kwakhona kwiilwimi ezingaphezu kwama-20 ezahlukeneyo ezixhaswa yiCinema APK. Ngenxa yoko, unokubukela umxholo odumileyo osuka kwiindawo apho ungaqhelananga khona nolwimi lwasekuhlaleni.
Ukuba awanelisekanga lulungiselelo olungagqibekanga lwale Cinema Apk, ungayikhupha kwaye uyifake kwakhona i-app. Ungasebenzisa i Okwenene Debrid ikhonkco generator ukuthintela caching. Okwenene Debrid iya kukubonelela ngamakhonkco amaninzi akumgangatho ophezulu ovela kwiiseva ezinciphisa i-caching kwaye unokonwabela imovie ekumgangatho ophezulu kunye nokubonisa amakhonkco. Ngoko khawuleza ungene kwi-debrid yokwenyani kwiisetingi zeakhawunti yakho kwaye ufumane la makhonkco kwangoko.
FAQs malunga Cinema HD V2
Ndingazonwabela iimuvi kunye neenkqubo zeTV xa ndingekho kwi-intanethi kwi-apk ye-Cinema?
Ewe. Le Cinema apk iya kukuvumela ukuba ukhuphele nayiphi na imuvi, kwaye uyibonise kwisixhobo sakho, ukuze ukonwabele ngokulula iimuvi ezikhutshelweyo kunye neenkqubo zeTV nokuba awunanxibelelwano lwe-intanethi okanye idatha yeselula.
Ngaba kufuneka ndicothule ifowuni yam ye-Android ngaphambi kokukhuphela Cinema HD APK?
Hayi, awudingi ukucothula isixhobo sakho kuqala, kwaye kufuneka uvule umthombo ongaziwayo ukukhuphela i-cinema apk.
Ndingakwazi ukongeza izihlokwana zeemuvi, imiboniso bhanyabhanya Cinema HD Apk ngesandla?
Ewe. Cinema HD ikunikeza iimuvi zasimahla kunye nothotho lweTV enemibhalo engezantsi efumaneka kwithala leencwadi le-movie. Nangona kunjalo, le Cinema apk app ikuvumela ukuba wongeze izihlokwana ngesandla. Ukwenza oku, unganqakraza kwizicwangciso kumdlali wemidiya uze ukhethe ifayile engezantsi (.srt) kwindawo yokugcina kwaye ujabulele imixholo ngoko nangoko.
Ngaba kufuneka ndibhalise iakhawunti kwaye ndihlawule umrhumo wenyanga wokubukela iimuvi kunye nemiboniso bhanyabhanya kwiCinema Apk?
Hayi. Ungafikelela ngokukhululekileyo le app ngaphandle kokuba ubhalisele i-akhawunti. Kwakhona, le Cinema Apk esemthethweni kwiwebhusayithi yethu cinemahdv2.net Inikezelwa simahla, ukuze ukwazi ukuntywila kumxholo owuthandayo le app inokukunika ngaphandle kokukhathazeka ngayo nantoni na.
Ngaba kukhuselekile ukuhlohla Cinema HD app kwiwebhusayithi yakho?
Cinema HD Apk kwiwebhusayithi yethu cinemahdv2.net iye yahlolwa kwaye yavavanywa ngokusebenzisa izixhobo ezichasene ne-malware. Siyivavanye i-app kwaye asibonanga nabuphi na ububi, ngoko ke unokuqiniseka nge-100% yokhuseleko lwale app kwaye wonwabele umxholo ekunika wona.
Ndingenza ntoni ukuba wam Cinema HD Usetyenziso lunengxaki yekhonkco lostrimisho?
Ukuba udibana nengxaki ngelixa uzama ukudlala ikhonkco lokusasaza, oko kubonisa ukuba umdibaniso uphantsi. Kufuneka ulinde de ikhonkco ilungiswe.
Ngaba kusemthethweni ukusebenzisa i Cinema HD usetyenziso?
Akukho mthethweni ukukhuphela kunye nokufaka i Cinema HD app kwifowuni yakho, kodwa ukusasaza imathiriyeli enamalungelo okukopisha lulwaphulo-mthetho. Ngoko musa ukusasaza nantoni na ngaphandle komxholo ogunyazisiweyo.
Is Cinema HD iyahambelana nesixhobo sam?
Ungayifaka iCinema kwiFirestick/Fire TV, iFireStick Lite, iiBhokisi zeTV ze-Android, izixhobo eziphathwayo ze-Android, kunye nokunye.
Is Cinema HD Olona setyenziso bhanyabhanya lubalaseleyo olukhoyo?
Ewe, Cinema HD Usetyenziso ngoku lolona khetho lubalaseleyo lokubukela iimuvi kunye neenkqubo zikamabonwakude simahla.
Ndingayenza njani iApp yeTV yam?
Oku akufanele kube yingxaki kwiminyaka yobudala beGoogle Chrome, i-Amazon Firestick, kunye nobuchwepheshe obufanayo.
Ingaba i Cinema HD APK iyahambelana Smart TVs?
Samsung Smart TVs, LG Smart TVs, Panasonic smart TVs, Sony umabonakude, Sony Bravia umabonakude, Mi TV seti, cloudwalker smart TVs, TCL smart TV, Kodak Smart TV iiseti, kunye nezinye iimpawu ezininzi ziyafumaneka.
Is Cinema HD iyahambelana noomabonakude abakrelekrele kunye neFirestick/Fire TV?
Ewe! Cinema HD I-APK inokukhutshelwa kwaye ifakwe kwiFirestick okanye iTV yoMlilo. Unako ngokunjalo ukuhlohla Cinema HD on Android TV, Android Box, Nvidia Shield, PS 4, kunye Xbox One.
Ngaba kuyimfuneko ukusebenzisa inethiwekhi yabucala enenyani nge Cinema HD?
Senza, nangona kunjalo, sincoma ukusebenzisa inkonzo ye-VPN efanelekileyo xa ubukele Cinema HD.
Ngaba kunokwenzeka ukufaka Cinema Hd kwiPC yeWindows?
Ewe! Ungasebenzisa iinkqubo ezichazwe kweli nqaku ukufaka Cinema HD kwi-Windows PC/Laptop.
Ngaba ikhona inkxaso yeChromecast nge Cinema HD?
Ewe! Cinema HD v2 iyayixhasa iChromecast.
Cinema HD Download yenye yee-apps ezininzi ze-Android ezibonelela ngemiboniso bhanyabhanya oyithandayo. Le app igqamile kuba ibonelela abasebenzisi be-Android ngenkqubo eyaziwa ngokuba yiCinema kunye neeMovie zeHD ezinamawaka emiboniso bhanyabhanya kunye nothotho lweTV. Unokwanelisa ukuthanda kwakho imuvi ngale app, khuphela ngokukhawuleza inguqulelo yamva nje kwi-Android, intonga yoMlilo kunye nePC kwiwebhusayithi yethu ukonwabela ngoku.
© 2022 CinemaHDv2.Net. Onke Amalungelo Agciniwe.